Amiirka guud ee Alshabaab oo cod u soo duubay musharixiinta madaxweynaha Soomaaliya. – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
Amiirka guud ee Alshabaab oo cod u soo duubay musharixiinta madaxweynaha Soomaaliya.
July 20, 2021 Xuseen 2
Puntlandtimes (Muqdisho)-Amiirka guud ee malayshiyaadka ka dagaalama Soomaaliya ee Alshabaab Axmed Cumar abu Cubeyda ayaa waxa uu jeediyey khudbad maqal ah oo socotey 30 daqiiqo uuna kaga hadlay arrimo quseeya Soomaaliya.
Abuu Cubayda ayaa waxa uu khudbaddiisa si qoto dheer ugaga hadlay xaaladda guud ee Soomaaliya, arrimaha doorashooyinka, dagaalka ay kula jiraan dowladda iyo shacabka Soomaaliya iyo xogo quseeye siyaasiyiinta Soomaalida.
Isagoo ugu horayn u hambalyeeyey dhammaan umadda Muslimiinta ayaa waxa uu madaxda dowladda Soomaaliya ku eedeeyey inay yihiin kuwo ka Amar qaata dalal shisheeye Isagoo sheegay in fashil uu ahaa Shirkii Afisiyooni ka dhacay.
Maruu ka hadlayey musharixiinta madaxweynaha Soomaaliya ee doorashada 2021 ayaa waxa uu sheegay inaysan waxba soo kordhin doonin Murashaxiinta Madaxweynaha utaagan kuna sheegay in iyaguba dalal shisheeye u adeegayaan digniin ayuuna udiray.
Waxuu iloobey in uu noo sheego cida uu Isla ahaantisu u adeego oo uu amaradooda maatada ugu laayo